योङ ब्वाइजसँग हार्यो युनाईटेड, बार्सामाथि बायर्नको शानदार जित - Kantipath.com
च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत समूह चरणको पहिलो खेलमा इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाईटेड पराजित भएको छ । मंगलबार राति भएको खेलमा युनाईटेड स्विस क्लब योङ ब्वाइजसँग २-१ गोल अन्तरले पराजित भएको हो । १० खेलाडीमा समेटिएको युनाईटेडले सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा हार व्यहोर्नु परेको हो ।
खेलको १३ औं मिनेटमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गोल गर्दै युनाईटेडलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। उनले ब्रुनो फर्नान्डेजको पासमा गोल गरे । रोनाल्डोको यो १ सय ३५ औं च्याम्पियन्स लिग गोल हो । रोनाल्डोले सर्वाधिक धेरै च्याम्पियन्स लिग खेल्ने खेलाडीको कीर्तिमानसँग बराबरी समेत गरेका छन् । रोनाल्डोले इकर क्यासिलासले १ सय ७७ खेलको कीर्तिमान बराबरी गरेका हुन् ।
३५ औं मिनेटमा युनाईटेड १० खेलाडीमा समेटियो । क्रिस्टोफर मार्टिनलाई फउल गरेपछि युनाईटेडका आरोन वान बिसाकाले रातो कार्ड पाएका थिए । खेलको ६६ औं मिनेटमा योङका निकोलसले गोल गर्दै खेल १-१ गोलको बराबरीमा ल्याए । त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा थियोसन जोर्डनले गोल गर्दै योङलाई २-१ को जित दिलाए ।
जितसँगै समूह एफको योङले पहिलो खेलमै महत्वपूर्ण ३ अंक जोडेको छ । युनाईटेडले हारबाट सुरुवात गरेको छ । च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत नै समूह जीको खेलमा सेभिया र साल्जवर्गले १-१ गोलको बराबरी खेलेका छन् । नयाँ सिजनको पहिलो खेलमा बार्सिलोनाले स्तब्धपुर्ण नतिजा ब्यहोरेको छ । मंगलबार राति बार्सिलोना घरेलु मैदानमा जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखसंग ३–० ले पराजित बनेको हो ।
बायर्नको जितमा रोबर्ट लेवान्डोस्कीले दुई तथा थोमस मुलरले एक गोल गरे । खेलमा अग्रता बायर्नले ३४ औं मिनेटमा मुलरको गोलबाट लिएको थियो । लिरो सानेले उपलब्ध गराएको पासमा मुलरले गोल गरेका थिए । मुलरले बार्सिलोनाविरुद्ध करियरको सात गोल पुरा गरे ।
दोस्रो हाफमा दुई गोल लेवान्डोस्कीले गरे । उनले ५६ औं मिनेटमा बायर्नको अग्रता दोब्बर बनाएका थिए । खेल सकिन एक मिनेट अघि लेवान्डोस्कीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै बायर्नलाई ३–० को शानदार जित दिलाए । लियोनल मेस्सी बिना पहिलो पटक मैदान उत्रिएको बार्सिलोनाले स्तब्धपुर्ण नतिजा ब्यहोरेको छ । समूह इको खेलमा जर्मन क्लब बायर्नले शानदार सुरुवात गरेको छ । समुहमा बेन्फिका र डायनामो किभ छन् । दुवैले मंगलबार राति गोल रहित बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन् ।
Previous Previous post: “स्टार म्युजिक एण्ड फिल्मस अवार्ड – २०७८” को आबेदन फर्म खुल्ला
Next Next post: ट्रकभित्रै बालिका बलात्कार गर्ने चालक र सहचालक पक्राउ
रियल मड्रिड फर्कन चाहान्छन् रोनाल्डो !
मेस्सी बिनै बार्सिलोनाकाे शानदार जित !
मेस्सीले बनाए नँया कीर्तिमान जिते ‘गोल्डेन शु’
रोनाल्डोको ह्याट्रिकमा पोर्चुगलको जित,इंग्ल्यान्ड युरोकपमा छनोट